गोकुल बाँस्कोटाको टिप्पणी : एक एमाले बिरुद्ध चार निर्दलीय महागठबन्धन हाहाहा ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com गोकुल बाँस्कोटाको टिप्पणी : एक एमाले बिरुद्ध चार निर्दलीय महागठबन्धन हाहाहा ! - खबर प्रवाह
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दलगत उम्मेद्धवारी नदिएकोमा कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले यसलाई बहुदलीय लोकतन्त्रमा रुख र गोलाकार बेपत्ता भएको पनि बताएका छन् ।